Ogaden News Agency (ONA) – Xisbiga Dimuqraadiga Maraykanka oo Doortay Gudoomiye Cusub.
Xisbiga Dimuqraadiga Maraykanka oo Doortay Gudoomiye Cusub.
Kabacdi tartan adag oo ka dhex dhacay Murashaxiinta u loolameysay Gudoomiyaha Xisbiga Dimuquraadiga ee Maraykanka ayaa waxaa xilkaasi ku guuleystay Tom Perez oo horey uga soo tirsanaa xukuumadii hore ee Madaxweyne Obama.
Tartanka ugu weyn ayaa u dhaxeeyey kooxda Isbedal doonka ah oo taageerayey Murashax Keith Ellison oo ah Xildhibaan Madow oo Muslim ah oo laga soo doorto gobalka Soomaalida ku badan tahay ee Minnesota. Murashaxan ayey sidoo kale taageerayeen siyaasiyiin culus oo ka tirsan xisbigaasi oo ay kamid yihiin Sentorada Bernie Sanders iyo Elizabeth Warren.
Dhinaca kale ayaa ahaa kooxdii lasoo shaqeysay Barack Obama iyo Hillary Clinton oo iyagu caqabad weyn ku noqday in isbedal weyn lagu sameeyo hogaanka xisbiga Dimuquraadiga oo ay waji gabax weyn ka raacday doorashadii sanadkii hore oo ay ku dhumiyeen kuraas badan ee Aqalada Baarlamaanka iyo waliba gobalada dalkaasi oo ay usii dheertay guuldarii Doorashadii Madaxweynaha.
Xisbiga Dimuquraadiga ayaa laga sugayaa inay dajiyaan qorshihii ay kula loolami lahaayeen xisbi Xaakimka Jamhuuriga ah ee uu hogaamiyo Madaxweyne Donald Trump.